लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतले गोटीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ— सीपी मैनाली ,महासचिव, नेकपा (माले) – Maitri News
लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतले गोटीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ—
सीपी मैनाली ,महासचिव, नेकपा (माले)
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतले गोटीका रुपमा प्रयोग गरेको र जसरी पनि नेपालमा अस्थिरता मच्याउन लोकमान जोगाउने अभियानमा लागेको दाबी गर्नुहुन्छ । भारतको एक मात्र उदेश्य नेपाललाई असफल बनाउने रहेको भन्दै उनले भारत जसरी पनि लोकमान जोगाउने अभियानमा लागेकाले त्यो अभियान असफल बनाउनु पर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति, लोकमान काण्डलगायतका बारेमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
मुलुककको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
मुलुकको पछिल्लो राजनीति भनेपछि हामीले संविधान जारी भएपछिको राजनीतिलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले त्यो राजनीतिलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति निकै तरल र अस्थिर भएको मैले पाएको छु । संविधान जारी गर्दाताका नै नेपालका राजनीतिक दलहरुले हाम्रो छिमेकी मुलुक, मुख्य गरेर भारतको चाहना अनुसार वा उसको रणनीति अनुसारको संविधान जारी नगरेकाले वा भारतलाई संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा वेवास्था गरेको हुनाले भारत त्यति खुश हुन सकेन ।
अहिले पनि भारत संविधान शंशोधनमार्फत नेपालको संविधानमा आफ्ना रणनीतिहरु घुसाउने प्रयासमा छ । त्यसै अनुरुप नै भारत अहिले पनि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खेलोमेलोमा लागेको छ । त्यही खेलोमेलोमा उसले कहिले माओवादी, कहिले कांग्रेस त कहिले मधेसवादी दलहरुलाई उचालिरहेको छ ।
भारत सुरुमै नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपाललाई झुकाएर आफ्नो रणनीतिको संविधान जारी गर्ने चलखेलमा थियो । उसले त्यही अनुरुप नै नाकाबन्दी जस्तो कठोर यातना नेपाल र नेपाली जनतालाई भोग्न बाध्य बनायो । तर, उसको त्यो प्रयासलाई पाँच महिनापछि केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकारले असफल तुल्यायो अर्थात नाकाबन्दी विफल बनायो ।
नाकाबन्दीपछि पनि भारत जसरी पनि नेपालमा अस्थिरता मच्याउन उध्त थियो । उसले त्यसका लागि सबै भन्दा बढी संर्कीण स्वार्थ बोकेका मधेसवादी दलहरुलाई बढी प्रयोग गर्यो । कहिले अंगिकृत नागरिकतावालाले पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता सर्वोच्च पदमा जान पाउनु पर्ने त कहिले मधेसमा छुट्टै दुई प्रदेश हुनुपर्ने जस्ता नारा उचालेर मधेसवादी दललाई आन्दोलित बनाई रह्यो । यो सबै भारतकै डिजाइन थियो ।
आफ्ना रणनीति सफल बनाउन युद्ध भन्दा पनि कठोर मानिने नाकाबन्दी लगाएको भारत अहिले अहिले संविधान संशोधनमार्फत त्यही रणनीतिमा लागेको छ । जसले गर्दा नेपालको राजनीति अहिले पनि विभिन्न बाहनामा तरल र अस्थिर बनेको छ ।
त्यतिमात्र होइन भारतले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने र नेपाललाई सँधै आफू आश्रित बनाउँने प्रपच्च अनुसार नै ओली नेतृत्वको राष्ट्रबादी सरकार ढालेको थियो ।
भनेपछि अहिले पनि नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न भारतीय केही तत्वहरु नेपालमा सक्रिय छन् होइन त ?
हो, त्यो त भनिरहनु पर्ने कुरा नै होइन नि ? अहिले पनि नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न भारतीय केही तत्वहरु नेपालमा सक्रिय छन् । कहिले जातीय त कहिले क्षेत्रीय राज्य त कहिले जातीय संर्किणताका कुरा गरेर अनि कहिले सत्ता स्वार्थ देखाएर पनि नेपालमा अस्थिरता मच्याउने खेलहरु जारी रहेका छन् । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध अहिले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, भारत अहिले पनि नेपालमा चलखेल गर्ने र कार्कीलाई जोगाइ राख्ने खेलेमेलोमा लागेको छ भन्ने आरोप छ नि, हो ?
हो, त्यो त देखिएकै कुरा हो नि । लोकमान अहिले अक्षम भएका होइन । उनलाई नियुक्त गर्ने बेलामै उनको अक्षमताका बारेमा निकै प्रश्नहरु उठेका थिए । उनको विगत राम्रो नभएको भनी जनमतमै धेरै टिप्पणीहरु भएका थिए । उनी कसरी प्रमुख आयुक्त बने भन्ने कुरा अहिले मात्र होइन, त्यतिबेला पनि टिप्पणी भएको थियो । उनी प्रमुख आयुक्त बनेपछि पनि जुन ढंगले कानुन, नियम, ऐन, संविधानलाई लत्याएर, जनादेश र कार्यादेशलाई नाघेर स्वार्थपूर्तिका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने, पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्ने गर्न थाले । त्यसले सीमा नाघेपछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उनले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेर आचरण विपरित काम गरेका कारण उनीमाथि महाअभियोग लागेको हो ।
अहिले जुन दलले उनीमाथि महाअभियोग लगाउन अगुवाई गरेको छ । त्यही दलको सिफारिसमा कार्की नियुक्त भएका थिए । अहिले त्यही दल अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्र नै उनीलाई महाअभियोग लगाउन अघि सर्नुलाई कसरी हेर्ने ?
हो, तत्कालीन माओवादीकै सिफारिसमा लोकमान नियुक्त भएका हुन् । त्यतिबेला पनि उनको विरुद्धमा ठूलो जनमत थियो । यीनको विगत राम्रो छैन । यीनले जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्दैनन् । भन्ने सबैतिर हुँदाहुँदै उनी नियुक्त भए । त्यति मात्र होइन, उनको नैतिक चरित्रमाथि पनि निकै ठूलो दबाब थियो । तर पनि उनी नियुक्त भए । त्यतिबेला केही नेताहरुको संर्किणस्वार्थ अथवा आफ्नै भलाई गर्ला कि भन्ने सोचले उनी प्रमुख आयुक्त बने । देशको अबको राजनीतिमा उनको भूमिका कस्तो होला ? उनले प्रजातन्त्र मास्न कस्तो खेल खेल्लान ? भन्नेसम्मको पनि हेक्का नराखी उनलाई हतारमा नियुक्त गर्ने काम भयो । त्यो राजनीतिको अल्पदृष्टि थियो । अहिले त्यही अल्पदृष्टिको परिणाम स्वयम् माओवादीले पनि भोग्दै छ । केही शक्ति राष्ट्रको पुच्छर बनाउँन गरिएका केही षडयन्त्रहरुको माओवादीले अलिअलि चाल पाउँदै आएको छ ।
अहिले पनि देशमा अस्थिरता मच्याउन मधेसवादी दललाई प्रयोग गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यो कुरामा पनि भारतको चलखेल हो, भन्ने कुराको हेक्का माओवादीलाई यो घटनाबाट प्राप्त होस भन्ने मेरो सदिक्षा छ ।
ए भनेपछि लोकमानलाई चचाल्ने काम अहिले भारतकै इशारामा भएको छ होइन त ?
यो त प्रष्ट देखिएको कुरा हो नि ? हिजो जसरी लोकमानसिंहलाई अल्पदृष्टिका आधारमा अख्तियार प्रमुख जस्तो पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने काम भएको थियो । त्यो उनीहरु आफैको थिएन । त्यो कुरा उनीहरुले लोकमानको नियुक्ति र उनको आचरणपछि विस्तारै थाहा पाउँदै आए र अहिले उनीहरु नै लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने कार्यमा सक्रिय बनेका छन् । अहिले व्यापक जनदबाब बढिरहेको छ । लोकमानलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भनेर । त्यसैले पनि दलहरु जिम्मेवार भएर अहिले लोकमानविरुद्धको महाअभियोग सफल बनाउँने कार्यक्रमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले त्यस बारेमा पार्टी भित्र गम्भीर छलफल चलाएको छ ।
तर, बाह्यशक्ति भने यी सबै कुरालाई नदेखे झैँ गरेर लोकमानलाई जोगाउँने अभियानमा लागेको छ । यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ? भारत अहिले पनि नेपालमा अस्थिरता मच्याउने अस्त्रका रुपमा लोकमानलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ र ऊ लोकमानलाई त्यहाँ राखिराख्न चाहन्छ । त्यो प्रमाण भनेको भारतीय दूताबासका राजदूतको दौडधुप र भारतका पुच्छरहरुको असिनपसिनले पनि प्रष्ट हुन्छ । अहिले विभिन्न नेताहरुको घरदैलोमा भारती राजदूत पुग्नुले पनि थप प्रष्ट हुन्छ । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउँने ध्यानमा रहेको भारत अहिले पनि त्यही खेलमा लागेर लोकमानलाई प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले नेपाली कांग्रेसलाई पनि प्रयोग गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । यदि यस्तो हो र कांग्रेस जस्तो दल फस्यो भने बुझ्नुहोस कांग्रेसको ओरालो सुरु भयो । भारत अहिले पनि आफ्नो गोटी वा शक्तिलाई जोगाउन लागि परेको छ । सबैले त्यसलाई असफल बनाउँनुपर्छ । अहिले उसले राजनीतिक गैर राजनीतिक सबै ढंगले त्यो खाले चलखेल गरेको छ । त्यो असफल बनाउनुपर्छ ।